"စာဖတ်သူ နှင့် စာမဖတ်သူ"
စာပေဗဟုသုတရှိသူသည် စာပေဗဟုသုတမရှိသူထက် အမြဲတမ်း ခေါင်းတစ်လုံးမြင့်နေတယ်။ အနောက်တိုင်းသားများက အရှေ့တိုင်းသားများထက် နေရာတိုင်းတွင် သာနေခြင်းမှာ စာဖတ်ခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလန်၌ ရပ်ကွက်တစ်ခုဖော်တိုင်း မဖြစ်မနေပါရသောအရာမှာ "စာကြည်တိုက်"ပင်ဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်စာကြည်တိုက်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ထိုစာကြည်တိုက်တွင် ကမ္ဘာ့ဂန္ထဝင်စာအုပ်အားလုံး ရှိနေရသည်။
ထိုစာပေဗဟုသုတအားကြောင့်လည်း ကျွန်းနိုင်ငံလေး တစ်ခုသာဖြစ်သော အင်္ဂလန်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးကို အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စာဖတ်ခြင်းက သင့်ကို ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေ ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ
စာဖတ်ခြင်းက ဗဟုသုတတိုးပွားဖို့အတွက်ပဲလို့ ထင်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ စာဖတ်ခြင်းကနေ ဗဟုသုတ တိုးပွားရုံသာမက သင်မသိသေးတဲ့ အခြားကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အားလပ်ချိန်တွေမှာ စာဖတ်ပါ။
၁. ဦးနှောက်ကို ပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်။
စာဖတ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကို အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားကြွက်သားတွေလိုပဲ သင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လေ သင်ရဲ့ကြွက်သားတွေ ကြီးထွားလာလေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂. စာဖတ်ခြင်းက အာရုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းစေပါတယ်။
ဘဝမှာ တစ်ခုခုကို အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် အာရုံစူးစိုက်မှုရှိနေဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သင်ဟာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်နေတဲ့အခါမှာ စာရွက်ပေါ်က စာလုံးတွေတိုင်းအပေါ်ကို အာရုံစူးစိုက်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းထဲမှာ မျောပါနေပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မူအကျင့်ကို အလွယ်တကူ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၃. ဗဟုသုတများစွာ ကြွယ်ဝစေတယ်။
စာအုပ်ဖတ်ခြင်းဟာ ဗဟုသုတကြွယ်ဝစေပြီး အတွေးအခေါ် မြင့်တက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်လေး ဘယ်လောက်ပါးပါစေ။ သင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြန်လည် အသုံးပြုရမယ့် အသိပညာတွေပါဝင်ပြီး သင် စာများများ ဖတ်နိုင်လေ သင့်အတွက် ပိုအကျိုးများလေ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်ကောင်းကောင်း၊ ဝတ္ထုကောင်းကောင်းတစ်အုပ်ဟာ သင့်ကို တခြားကမ္ဘာတစ်ခုဆီ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပြီး သင့်လက်ရှိဘဝရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ကုသဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅. စာဖတ်ခြင်းက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်လိုက်တာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတဲ့သူတွေ များစွာ ရှိတတ်ပါတယ်။ စာဖတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်မရှိသေးကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ အိပ်ယာမဝင်ခင် စာအုပ်ကို နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အိပ်စက်ချိန်မှာ ပိုပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆. လူတွေကို ပိုပြီး နားလည်ပေးနိုင်လာမယ်။
တခြားလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ဖတ်ရှုခြင်းဟာ ဘဝမှာ တခြားလူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပိုမိုသိလာပြီး လူတွေကို ပိုမိုနားလည်တတ်လာပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံကြည့်ပြီး ဝေဖန်ဖို့က လွယ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သင်ဟာ စာအုပ်တွေထဲကနေ လူအများရဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုးစုံကို ဖတ်ထားမယ်ဆိုရင် လူအမျိုးမျိုးကို ပိုပြီး နားလည်ပေးတတ်နိုင်လာပါတယ်။
မည်သည့်ကျောင်းဆရာမှ တပည့်များအား တစ်သက်လုံး သုံးမကုန်နိုင်လောက်သော ပညာသုတကို ပေးလိုက်နိုင်သည်မဟုတ်။ ကျောင်းသား၏ နှလုံးသားကို ပညာမွတ်သိပ်လာအောင် လုပ်နိုင်သူပင်လျှင် အတော်ဆုံးဆရာဖြစ်သည်ဟု ဆာရစ်ချယ်လစ်ဗင်းစတုန်း ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပညာရေးသြဝါဒစကား ဆိုခဲ့ဖူးပါသည်။
ထိုနောက်တစ်ဖန် လူငယ်တို့၏ဘဝကို ပညာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်စေရန် စိတ်အားထက်သန်လေ့ရှိသော ဆရာကြီးဦးအောင်သင်း၏ အမှာစကားက ဘယ်သူတွေ ဘာပြောနေနေ မင်းကိုမင်းချစ်ရင် ပညာသင်ပါ၊စာဖတ်ပါ။ မိဘကိုချစ်ရင် ပညာသင်ပါ၊စာဖတ်ပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်ရင် ပညာသင်ပါ ၊ စာဖတ်ပါ ။
ပညာဆိုတာဘာလဲ မေးရင် မသိဘူး။ မမေးရင် သိတယ်။ ပညာသင်တယ်ဆိုတာ အတွေးအကြံနဲ့ အတွေ့အကြုံကို လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် စာဖတ်သင့်တာလဲ။ စာအုပ်ဆိုတာ ဝင့်ခွင့်ဖြေစရာမလိုတဲ့ တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းဆရာမရှိဘူး။ ဝင်ကြေးမပေးရဘူး။
ထိ့ုနောက်တစ်ဖန် လူမျိုးတစ်မျိုး၏ အခြေအနေ အဆင့်အတန်း အနိမ့်အမြင့်ကို သိလိုပါလျှင် ထိုလူမျိုးတို့ လေ့လာလိုက်စားသော စာပေ၊ အနုပညာ၊ ဂီတတို့ကို ကြည့်မှ သိနိုင်မည် ဟု မြဝတီမင်းကြီး ဦးစက မှတ်တမ်း ပြုခဲ့တာကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင်လည်း စာအုပ် စာပေသည်ပင်လျှင် လူ့တန်ဖိုး လူ့အဆင့်အတန်းကို ဖော်ပြနေပေါတယ်။
တကယ်တော့ စာဖတ်ခြင်းသည် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် တူ၏။ တဖြည်းဖြည်းချင်း လူသားဘဝကို ကောင်းကျိုးပေးသောသဘောရှိ၏။ အချိန်ကြာလေ အကျိုးရှိလေဖြစ်၏။
စာပေစကား နေ့တိုင်းကြားက ထူးခြားလိမ္မာရှိသည်သာ။
စတဲ့ ဆောင်ပုဒ်များသည် စာအုပ်စာပေကို ဖတ်စေချင် မြတ်နိုးစေချင်သော စာရေးဆရာကြီး ပညာရှိကြီးတို့၏ စေတနာ အမှာစကားများပင် ဖြစ်တော့သည်။
စာ ဘာကြောင့် သင်ရတာလဲ?
တကယ်တော့ စာသင်တာ စိတ်တတ်ဖို့ပါ။ စာသာတတ်ပြီး စာမဖတ်ရင် စိတ်မတတ်တော့ပါ။ စိတ်မတတ်ရင် ပညာတတ် လူပေါကြီးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
မရှိတာလည်း ရှိအောင်လုပ်ရင် ရှိနိုင်ပါတယ်။ မသိတာလည်း သိအောင်လုပ်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ မလုပ်တာကတော့ ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့တာမို့ အခက်အခဲဆုံးလို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် စာဖတ်ပြီး သိသွားနိုင်ပါတယ်။ အသိနဲ့ အလုပ်လုပ်မည်ဆိုပါက သေချာပေါက် ရှိလာမှာပါ။
ဘဝမှာ ကိုယ်ဘာသိချင်သလဲ စာဖတ်ပါ။
ဘဝမှာ ကိုယ်ဘာရှိချင်သလဲ စာဖတ်ပါ။
ဘဝမှာ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်သလဲ စာဖတ်ပါ။
စာဖတ်ခြင်းဟာ မင်းကို ဗဟုသုတနဲ့ပြည်ဝတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းသူတစ်ယောက်ပေါ့။ မင်းဉာဏ်ကောင်းချင်ရင် စာများများဖတ်ပါ။
စာရေးခြင်းဟာ မင်းကို တိကျသေချာတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်စေပါတယ်။ နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံးဆိုတဲ့ စကားပုံကို မင်းကြားဖူးမှာပါ။ တွေးတော့ကြံဆခြင်းကတော့ မင်းကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ လိုလျှင်ကြံဆ နည်းလမ်းရဆိုသလိုပေါ့။ တွေးတတ်ဖိုဆိုတာကလည်း မင်း စာများများဖတ်မှ တွေးတတ်မယ်ဆိုတာ မင်းငြင်းချင်သေးလား။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ မိမိကိုယ်ကိုယ်ချစ်ရင် ကောင်းကောင်းစာဖတ်ပါ။ မင်းကိုယ်မင်း မချစ်ရင်တော့ စာမဖတ်ဘဲ နေချင်သလိုသာ နေလိုက်တော့။ စာမဖတ်ခြင်းက မင်းဘဝကို နိမ့်ကျစေမှာဖြစ်ပြီး စာဖတ်ခြင်းကတော့ မင်းဘဝကိုတောက်ပစေမှာဖြစ်ပါတယ်။